Ziziphi iindlela zokwenza uluhlu oluphezulu lweZR backlink?
Onke amashishini asekwe kwii-intanethi adinga isicwangciso esinamandla sokuthengisa ukutsalathisa kwiphepha lokuqala lekhasi lokukhangela. Zonke izicwangciso zokuphucula iinjongo ze-injini zifuna iintlobo ezahlukeneyo ze-backlinks. Ekukhanyeni kokuhlaziywa kweGoogle kokugqibela, ezi zilandelayo zifuna ukuba ngumgangatho ophezulu kwaye zivela kwi-website eziphezulu ze-PR. Naliphi enye i-backlink inokubhekwa njengexabiso eliphantsi kunye ne-spammy. Yingakho yonke i-webmaster idinga ukunyamekela ngokugqithiseleyo ngomgangatho we-backlinks eyakha umgangatho wezonxibelelwano ezingenayo zichaza apho indawo yakho izakubeka kwiinjini zokukhangela amagama athile.
Ngoko umbuzo yindlela yokudala uluhlu oluphezulu lwezakhiwo ze-backlink ngaphandle kokuchitha imali nemigudu?
Xa kuziwa ukulungiswa kwewebhusayithi kwiinjini zokusesha, umgaqo we-4 V usebenza okusemgangathweni:
Inani lezonxibelelwano ezibhekiselele kumthombo wakho wewebhu. Kusengumlinganiselo obalulekileyo wokuma. Nangona kunjalo, kufuneka ukhumbule ukuba i-backlink ezininzi kwiwebhsayithi ye-spammy, ayiyi kukunika inzuzo.
Imithombo eyahlukeneyo oyisebenzisa kwiinjongo zokwakha iinjongo. Okungakumbi, bhetele njengoko ibonisa iGoogle ukuba zingaphi iiwebhsayithi ezakha umdlalo wakho njengento ehloniphekileyo kunye neziqulatho ezifanelekileyo.
Isantya ufumana iinqununu kwiziko lakho. I-Google inokuyifumanisa ukuba uyakwakha i-backlinks ezininzi emva kobusuku. Endaweni yalo, kufuneka udale iikhonkco ezinomgangatho ongezantsi.
Umbhalo we-anchor kwikhonkco kwisiza sakho. Esi sibhalo sifanele senziwe kakuhle, sibambe kwaye siqulethe enye yegama lakho lokukhangela elijoliswe kuyo.
Uludwe lwezakhiwo eziphezulu ze-PR ezakhiweyo kwi-backlinks esemgangathweni
Ezi ndawo zilandelayo ziqala ukuqala kwiphankaso ye-backlink:
Yona iqonga eliphezulu le-PageRank yoluntu elinikezela abanini bewebhusayithi ngamathuba amaninzi okukhuthazwa kwamashishini.Enye yezinto eziphantsi kwesi satifikethi kukuba "akukho-landela" umgaqo-nkqubo wokwakha umnxeba. Kuthetha ukuba ukufumana i-backlinks kwi-Facebook ayiyi kudlula nayiphi na ijusi yokudibanisa kwi-domain yakho. Nangona kunjalo, i-backlinks ezivela kulo mthombo zinokwenza iprofayile yakho yekhonkco ithembeke ngakumbi kwaye ibe negunya emehlweni e-Google.
Iwebsite ye-PR9 ene-Google. Ibonelela nge-webmasters kunye kokubili okulandelayo kwaye akukho okulandela i-backlinks. Unokwenza i-backfollow backlinks kwiprofayili yakho yebhizinisi okanye inkcazo yevidiyo. Zonke ezinye izixhumanisi ziya kuba zilandelayo. Iindaba ezilungileyo kukuba unokuguqula isiteshi sakho se-YouTube sibe yinye ye-PR5 kwi-backlink ye-PR6. Iyakuchukumisa ngokuqinisekileyo izikhundla zakho.
iGoogle + ngumthombo wewebhu we-PR8. Yimpendulo yeGoogle kwi-Facebook. Apha ungakha ubuncinane omnye ulandele i-backlinks kwiwebhusayithi yakho. Lithuba elihle kakhulu kwiindawo zakho zokuphakamisa izikhundla njengoko i-Google isebenzisa le nqonga njengengxenye ye-algorithm yazo. Yingakho kubalulekile ukudala ikhasi le-Google + elibandakanya itekisi yesikhombi kunye negama lakho lokukhangela elijoliswe kwiProfayli / malunga nendawo Source .